Xil ka qaadistii Taliyihii Ciidamada DANAB oo dood laga keenay – Damqo
Xil ka qaadistii Taliyihii Ciidamada DANAB oo dood laga keenay
Hadal heyn badan iyo guux dadweyne ayay dhalisay tilaabadii dowladda madaxweyne Farmaajo ay xilka uga qaaday taliyihii ciidamada DANAB iyo magacaabista taliyaha cusub ee xilkaas loo magacaabay.
Dadka qaar ayaa kuu sheegaya in arintan ay salka ku heyso khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre , maadaama taliyaha xilka laga qaaday uu ka mid ahaa saraakiisha ugu dhawaa Xasan Cali Kheyre sidoo kalana ay isku beel ahaayeen.
Taliyihii Ciidanka Danab G/lle Ismaaciil Cabdimaalik ayaa xilka laga qaaday, kaddib markii todobaadyo ka hor shaqo joojin lagu sameeyay, isagoo xabsi guri ku ahaa Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga. Wararka ayaa sheegaya in lagu bedelay kuxigeenkiisa oo lagu magacaabo G/lle Axmed Beeryare oo ka mid ahaa Saraakiishii lagu soo tababaray dalka Mareykanka.
Shaqo ka joojinta Taliye Ismaaciil Cabdimaalik ayaa waxaa walaac ka muujiyay Mareykanka oo ka digay in Musuqmaasuqa iyo qaraabo kiil lagu sameeyo arrimaha ciidanka ay dib u dhac ku keeneyso horumarka dib u habeynta Ciidamada, ayna wiiqeyso amniga dadka Soomaaliyeed.
Todobaadyo ka hor ayaa waxaa soo baxayay warar sheegayay in Saciid Kampala oo horay u ahaa madaxii Hab Maamuuska Madaxtooyada, Madaxweyne Farmaajo qaraabo la ah in loo magacaabi rabay xilkaas, balse Mareykanka uu diiday, maadaama ciidanka DANAB ay yihiin Ciidan uu Tababaray, isla markaana mushaarkiisa iyo qalabeyntiisa uu Mareykanka bixiyo.
Waxaa jira cabsi dadka qaar ay ka qabaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo taas oo salka ku heysa iskuday ah in ay isi siiso awoodda dalka xilli saraakiisha ka aragtida duwan ay xilka ka qaadeyso.
Previous NISA oo sheegtay inay qabatay 79 Tan oo Kiimilo alshabaan loo waday ah iyo shaqsiyaadki waday
Next Sababihii Bur burka liibiya iyo danaha Awoodaha isku haya